Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed: Daraasad Af iyo Dhaqan – Raadraac
Home / Af Soomaali / Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed: Daraasad Af iyo Dhaqan
Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed: Daraasad Af iyo Dhaqan
“Ulajeeddada buuggani ma aha keliya in aan wax ka qoro taariikhda Soomaaliyeed, maadaama ay jiraan aqoonyahanno badan oo tixgelin mudan ay hortayda isku taxallujiyeen taariikhda Soomaaliyeed, walow aan la wadaagin figradaha qaarkood; laakiin ulajeeddooyinkayga ugu weyni waa labo: in aan wax ka ifiyo taariikhdii hore ee Soomaaliyeed oo laga eegayo dhanka cilmi-afeedka iyo dhaqanka, iyo in si cilmiyeysan aan u falanqeeyo habka ay u dhisanyihiin qabaa’ilka Soomaaliyeed iyo abtirsigooda, si aan u muujiyo in ayna sax wada ahayn sida dhaqan ahaan loo arko nidaamka uu tolku u samaysanyahay. Sida aan horayba ugu soo aragnay, qabiil kasta oo ka tirsan qabaa’ilka Soomaaliyeed wuxuu ka koobanyahay dad u dhashay iyo dad aan u dhalan oo isku milmay, kuwaasoo, si looga gudbo noloshii adkayd ee miyiga, dantu ku khasabtay inay isbahaystaan, gaar ahaan Soomaalida geela dhaqata haba ugu badnaatee. Waxaan ognahay in geelu uu yahay duunyada sida aadka ah looga jecelyahay Soomaalida dhexdeeda, maxaayeeley isagaa ugu nacfi iyo adkaysiba badan xoolaha, degaanka oomanaha ah. Taasina waxay keentay in layska dhaco, laguna dagaallamo. Sidaa darteed lagama maarmaan ayay ahayd, inta aan dawlad la helin, in qofku ku tiirsanaado tol, ha u dhasho tolkaas ama ha sheegto, si naftiisa iyo xoolihiisu ay u badbaadaan. Oraahdan caanka ah ayaan ka dheehan karnaa arrintaas “Ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow” (yacnii, haddaadan cudud lahayn qabiil xoog leh ku tiirsanow).”
Qoraaga, Bare sare Cabdalla Cumar Mansuur
Categories: Af Soomaali, Dhaqan, Taariikh
“Prof. Cabdalla Cumar Mansuur oo ah aqoonyahan cilmibaarista Soomaalida aad loogu yaqaan, wuxuu buuggan kaga hadlayaa mawduucyo saddex qaybood loo kooxayn karo: 1) Taariikhdii hore ee Soomaalida, taariikhda af-Soomaaliga iyo afafka ay bahwadaagta yihiin, haraagii dhaqan diimeedkii hore, xiriirkii ay Soomaalidu la lahayd xadaaradihii hore ee Bariga Dhexe. 2) Taariikhda fidintaanka Islaamka. 3) Taariikhda bulshada Soomaaliyeed oo uu qoraagu si gaar ah ugu lafagurayo dabeecadda tolka Soomaaliyeed iyo sida uu ku samaysmo. Wuxuu ku doodayaa in dhiig iyo dhalasho keliya aanu qabiilku ku samaysmine, uu isbahaysina ku abuurmo. Wuxuu kaloo ka faalloonayaa qabyaaladda siyaasadaysan, sababaha ay u jirto iyo siyaalaha maamulka dalka iyo dawladnimada lagaga bedbaadin karo. Qoraaga oo soo bandhigayaa cilmibaaris uu waqti badan u huray, oo ka jawaabeysa su’aalo Soomaali badan maankooda ku wareegaaya, wuxuu qoraalkiisa si cilmiyaysan ku salalaynayaa qaybaha dhaqanka Soomaalida: afka iyo lahjadihiisa, maansada, sheekooyinka hiddaha, maahmaahda, abtirsiga, iwm”
Axmed Faarax Cali “Idaajaa”
(Qoraa, Abwaan, bare Af Soomaali)
“Bare Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo ah buuni afeed, waxaynu uga barannay qoraallo waxtar u leh barashada Afka Soomaaliga. Buugga kan ku magcaaban “Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed” waa mid wax ku soo kordhinaya taariikhda dheer iyo tan dhaw ee Afka Soomaaliyeed, quruunta ku hadasha, miladdeeda, dhaqankeeda iyo ahaanteeda ummadnimo. Haddii ay ahaan jirtey ‘run sheeg, maanta waa run qor, cid kuu marag furta ma waayayside. Qoraal marag leh iyo hilib mindi leh, midna laguma mergado.”
“Buuggan oo uu qoray muftiga cilmi-afeedka iyo cilmiyaynta af Soomaaliga, Prof. Cabdalla Mansuur, waa waxqabad dhaxalgal ah oo cilmibaarista taariikhda Soomaalida ku soo kordhinaya aqoon ugub ah iyo xog qaali ah oo an laga heli Karin meel kale. Habka cilmiyaysan iyo dhumucda ay leedahay xogta buuggani ka bixinayo taariikhda bulshada Soomaaliyeed iyo afkeeda waa mid gaarsiisan heer ka tarjumaya xeeldheerenimada qoraha.”
Dr. Maxamed Daahir Afrax
(Guddoomiyaha Akadeemiye-Goboleedka Af Soomaaliga AGA)
“Buuggan waa natiijo ka mid ah baaritaanka uu muddo dheer ku hawlsanaa Prof. Cabdalla oo si qoto dheer uga fekeray afka Soomaalida iyo bulshadoodaba. Waxana dheeraad ah sida uu buuggan inagu tuso muhiimadda xiriirka u dhexeeya afka, bulshada iyo taariikhdaba. Buuggani waa il cusub oo dadka khuseeya diraasaadka Soomaaliyeed ay u baahanyihiin inay akhriyaan oo ay ka fekeraan.”
Dr. Martin Orwin
(Bare Af Soomaali ee Jaamacadda SOAS)
“Haddii aad jeceshahay afka, dhaqanka iyo sooyaalka soomaaliyeed, buuggan wuu ku cajibin doonaa, ku xiisagelin doonaa aragti ballaaranna ku siin doonaa.”
Cabdiraxman Maxamed Abtidoon
(Qoraa iyo Cilmibaare Afeed)
“Waa buug soo baxay xilligii loo baahnaa, xilli Soomaali afarta jaho ka kala dhacday, su’aalaha ahaanshuhuna batay.”
(Qoraa iyo bare Af Soomaali)
KU SAABSAN CABDALLA CUMAR MANSUUR:
Cabdalla Cumar Mansuur, 80tameeyadii wuxuu bara sare ka ahaa Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Dagaalkii sokeeye kaddib, wuxuu bare ka noqday Jaamacad ku taalla Roma , “Università degli Studi Roma Tre”, halkaas oo uu haatan weli ka wado hawsha mashruuca Kaydka Soomaaliyeed “Archivio Somalia” ee Xarunta Cilmibaarista Soomaaaliyeed ee isla Jaamacaddaas. Muddo badan ayuuna ku hawllanyahay cilmibaarista afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, buugaag iyo maqaallo badan ayuuna ka qoray. Buugaagtiisa ugu doorka roon waxaa ka mid ah: Barashada Naxawaha Af Soomaaliga, (la qore) Prof. A. Puglielli, London 1999; Qaamuuska Af Soomaaliga, ( la diyaariye) Prof. A. Puglielli, Roma 2012; Taariikhda iyo Luqadda Bulshada Soomaaliyeed, Sweden 2009 (daabacaaddii 1aad); Le lingue Cuscitiche e il Somalo, Studi Somali N.8, Roma 1988; Afafka Bahda Kushitigga iyo taariikhda Af Soomaaliga, Muqdisho 1981; Astaamaha guud ee Maansada Soomaaliyeed, Muqdisho 1977. Wuxuu ku nool yahay magaalada Roma ee wadanka Talyaaniga.
Looh Press. Leicester, UK
Be the first to review “Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed: Daraasad Af iyo Dhaqan” Cancel reply
Classification and Nomenclature of Somali Literary Forms: A New Perspective →
© Raadraac 2019